विश्वासको अर्थ के हो? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा हेर्नुहोस्
सुरु ऋण wiki भरोसा ऋण
1 विश्वास के हो?
2 निम्न तीन खेलाडिहरू उधार व्यवसायको भाग हुन्:
2.1 कसले एक विश्वसनीय ऋण प्रदान गर्दछ?
2.2 फिक्री ऋणको फाइदाहरू के हुन्?
2.3 के विश्वास को विश्वास को लागी प्रयोग गरिन्छ?
2.4 भुक्तान कसरी गरिन्छ?
पारंपरिक ऋण को विपरीत, वहाँ एक छ भरोसा ऋण तीन मुख्य अभिनेताहरू। एक विश्वसनीय ऋण तेस्रो अभिनेता द्वारा गरिन्छ कि एक प्रकार को क्रेडिट हो। ट्रिसी आम तौर मा एक बैंक या बीमा कम्पनी हो जो कि उधार कारोबार को उचित आचरण सुनिश्चित गर्दछ। तर राज्यले यो प्रकार्यलाई पनि मान्न सक्छ। एक ठुलो ऋण पनि एक निरन्तर ऋणको रूपमा चिनिन्छ किनभने ट्रिसीले क्रेडिट लाई पुरस्कार दिँदैन, तर केवल म्याद समाप्त हुन्छ।
निम्न तीन खेलाडिहरू उधार व्यवसायको भाग हुन्:
एकै ओर, राजधानी, जसले राजधानी उपलब्ध गराउँछ। राज्य वा राज्य बैंक सामान्य रूपमा एक स्रोतको रुपमा कार्य गर्दछ। एक धेरै प्रसिद्ध ज्ञानेन्द्र Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) हो।
त्यसपछि ट्रिसी, जो उचित स्यान्डिंगको लागि उत्तरदायी छ, साथ नै लागी लागी स्थापना र ब्याज दरहरू, र ट्रिजरलाई फर्वार्ड गर्दछ।
तेस्रो अभिनेता बेशक, उधारकर्ता। पैसा पनि सामान्य को रूप मा लागी लागी लागी लगाइएको छ। आवेदकहरू निजी व्यक्ति र कम्पनीहरू हुन सक्छन्।
कसले एक विश्वसनीय ऋण प्रदान गर्दछ?
जर्मनीमा, लगभग सबै बैंकहरूमा विश्वास ऋण खोल्न सकिन्छ। विशेष गरी Volksbank-Raiffeisen बैंकहरू र बचत बैंकहरू सेवा को लागि जानिन्छ। यो जसरी समाजमा एक उच्च प्रोफाइल देखि, त्यसैले उनीहरूको समग्र सामाजिक पदोन्नति अर्डर कि फलिफाप। धेरै बैंकहरूले अर्को ऋणको साथ संयोजक ऋण प्रदान गर्छन्। भविष्य अचल सम्पत्ति मालिकहरूले, उदाहरणका लागि, अचल सम्पत्तिको ऋण थपिएको छ। यसरी, बैंक र उत्तराधिकारी परम्परागत क्रेडिट प्रावधान पनि लाभ र विश्वस्त ऋण नयाँ ग्राहक को प्रस्ताव द्वारा प्राप्त भयो।
फिक्री ऋणको फाइदाहरू के हुन्?
एक फिडिक क्रेडिटले ट्रफीलाई फाइदा प्रदान गर्दछ जुन उसले गर्दैन क्रेडिट जोखिम किनभने त्यो तेस्रो पक्षको तर्फबाट कार्यरत छ। यसकारण दायित्व मात्र क्रेडिट को उचित स्थानान्तरण र ऋणको प्राविधिक ह्यान्डलिंगमा लागू हुन्छ।
यो विशेष रूप देखि बैंकों को ट्रस्ट को रूप मा सुविधाजनक छ किनकि उनि केवल क्रेडिट प्रबंधित गर्छन। र जब ट्रेजरले राजधानी प्रदान गर्दछ, उधारन बैंकको आफ्नै स्रोतले बोझ गर्दैन।
खरिदका लागि यस्तो क्रेडिट पनि सार्थक छ, किनभने यसले यसको प्रशासनिक स्रोतहरू प्रदान गर्दैन। यद्यपि उनले क्रेडिटको देयता पाउँछन् र फीस ट्रफीलाई भुक्तानी गर्छन्, उनी आफ्नै क्रेडिट प्रशासन भन्दा धेरै कम छन्।
तर उधारकर्ताको लागि पनि, यस्तो ऋण धेरै उपयोगी हुन सक्छ। अन्तमा, सर्तहरू बजार दरहरू भन्दा तल छन्।
के विश्वास को विश्वास को लागी प्रयोग गरिन्छ?
एक पछाडि ऋणको उद्देश्य सामान्यतया पहिले नै राखिएको छ र ट्रिसी द्वारा निर्धारित गरिन्छ। अधिकतर अवस्थाहरूमा निधि सब्सिडी कार्यक्रमहरूबाट सामाजिक नीति वा आर्थिक विकासको साथ आउँछ। वर्तमान उपयोगहरुमा ऊर्जा बचत उपायों (जस्तै फोटोवोल्टिक पौधों), पारिवारिक पदोन्नति या आवास निर्माण शामिल छ।
भुक्तान कसरी गरिन्छ?
एक विश्वसनीय ऋण भुक्तानी गर्दा, फरक विकल्पहरू छन्। कहिलेकाहिँ ट्रस्टहरूले तुरुन्तै रकम तिर्छन्, कहिलेकाहीँ आंशिक मात्रा पनि। उदाहरणका लागि, साधारणतया मात्र आंशिक मात्रामा भुक्तानी गरिन्छ। साथै उद्यमी ऋण को मामला मा, प्रो रेट भुगतान असामान्य छैन।
विश्वास ऋण को प्रावधान मुख्य रूप देखि सार्वजनिक मुद्रा हो, जुन ट्रफी द्वारा पारित हुन्छ। यस कारणले, राज्यले समग्र सामाजिक विकासलाई बढावा गर्न विश्वास ऋण पनि प्रयोग गर्दछ। उद्देश्यहरू, उदाहरणका लागि, लक्षित क्षेत्रीय आर्थिक विकास, सामाजिक पूर्वाधारमा लगानीको लागि एक सब्सिडी, साथसाथै स्व-रोजगारको पदोन्नति र व्यवसायको स्थापनाको लागि।
तपाईं निम्न भिडियोमा थप उपयोगी जानकारी पनि फेला पार्न सक्नुहुन्छ। क्रेडिटको अन्य महत्वपूर्ण प्रकारहरू प्रस्तुत गरिएका छन्।
अघिल्लो लेखक्रेडिट जोखिम